ख़बरदार ! सपना बाँड्ने र भाँड्नेहरु हो ! - Enepalese.com
वासिङटन डिसी 09:06
ख़बरदार ! सपना बाँड्ने र भाँड्नेहरु हो !
इनेप्लिज २०७३ असार ५ गते २१:५५ मा प्रकाशित
जनताहरु अचेल सपना देख्दैनन् प्रधानमन्त्री ज्यू , किनकी सपना देख्न त निदाउनुपर्छ । पन्ध्र महिना आकास ओढेर सुत्दा सपना हैन सान्त्वना सम्म जनताले पाएका छैनन् । तपाईहरु यस मानेमा अत्यन्त आलोचनाको पात्र हुनुहुन्छ ।